Unokwenza ntoni ukuba umntwana unesifo se-bruxism | IBezzia
Kufuneka wenze ntoni ukuba umntwana unesifo esibuhlungu
UMaria Jose Roldan | 25/09/2021 11:06 | Ukuhlaziywa ukuba 25/09/2021 11:09 | Oomama
Ukuba uqaphele ukuba umntwana wakho ugoba amazinyo xa elele, Kunokwenzeka ukuba unengxaki yokuphazamiseka ekuthiwa yi-bruxism. Sisifo esiqhelekileyo ngakumbi kunokuba unokucinga, sichaphazela ikota yoluntu. Ekuqaleni akukho mfuneko yakuzixhalabisa, kuba i-bruxism ihlala inyamalala okwangoku xa umntwana enamazinyo asisigxina.
Kwinqaku elilandelayo siza kukuxelela ngakumbi malunga ne-bruxism kunye ziziphi iziphumo ezinokuba nazo ngokubhekisele kwimpilo yomlomo yomntwana.
1 Yintoni bruxism
2 Izizathu eziqhelekileyo ze-bruxism
3 Ungayiphatha njani i-bruxism
I-Bruxism sisifo esichaphazela izihlunu zomlomo kwaye apho kukho uxinzelelo olugqithisileyo lwazo, kubangela ingxolo enkulu yokusila. I-Bruxism inokubangela iintlungu entlokweni, emhlathini, okanye endlebeni. Zimbini iintlobo okanye iintlobo ze-bruxism:
Yaziwa njenge centric, equka ukuqinisa amazinyo kunzima kunesiqhelo. Inokwenzeka zombini emini nasebusuku.
I-eccentric ibangela ukusila kwamazinyo kwaye ihlala yenzeka ebusuku.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-bruxism ixhaphakile kwaye yinto eqhelekileyo ngelixa amazinyo esenza. Njengomgaqo jikelele Esi sifo sihlala sinyamalala emva kokutsalwa ngokusisigxina kosana.
Izizathu eziqhelekileyo ze-bruxism
I-Bruxism inokubangelwa zizizathu zomzimba okanye ezengqondo.
Kwimeko apho kungenxa yezizathu zengqondo, kuvela i-bruxism ngenxa yoxinzelelo olugqithisileyo kubomi bomntwana okanye ngenxa yemeko ebalulekileyo yoxinzelelo.
Oonobangela banokubakho ngokwasemzimbeni, njengokuvela kwamazinyo amatsha okanye imeko yabo embi. Konke oku kuthetha ukuba banokutshixiza amazinyo ngelixa umntwana elele.
Ungayiphatha njani i-bruxism
Njengoko besesitshilo apha ngasentla, kwiimeko ezininzi, I-bruxism ihlala ihamba yodwa. Unyango lusebenza kuphela kwimeko apho lunganyamalaliyo kwaye lubangele ukunxiba okukhulu emazinyweni okanye kwiintlungu ezibuhlungu kuzo.
Ukuba umntwana mncinane kakhulu, vele ubeke ipleyiti kwindawo ephezulu kwaye ngaloo ndlela uthintele amazinyo ekuhluphekeni kakhulu. Ukuba ngaphezulu kweminyaka, i-bruxism ayipheli, Kuya kuba yimfuneko ukuqala unyango lwamazinyo okanye lwamathambo.
Ukuba kuvela ukuba i-bruxism ibangelwa zizizathu zengqondo, Into ecebisayo iya kuba kukusebenzisa amanyathelo ahlukeneyo okuphumla emntwaneni ukunciphisa uxinzelelo okanye amanqanaba oxinzelelo kangangoko kunokwenzeka. Kwimeko yezizathu zomzimba, kuyacetyiswa ukuba uqale unyango olusekwe kwi-physiotherapy enceda ukukhulula izihlunu zomlomo.
Ngamafutshane, Sukuba nexhala kakhulu xa umntwana wakho esila amazinyo xa ulele. Abazali kufuneka baqwalasele indlela esi sifo esivela ngayo xa imeko isiba mandundu. Ukunciphisa le bruxism, kuyacetyiswa ukuba ulandele uthotho lweendlela zokuphumla ezinceda umntwana ukuba afike ngokuzolileyo ngexesha lokulala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Kufuneka wenze ntoni ukuba umntwana unesifo esibuhlungu
Ngaba uyazi izifo eziqhelekileyo zethambo?
Iingcebiso zokunciphisa umda wekhabhoni